बहस गरेर पार्टी फुट्दैन तर षड्यन्त्र भयो भने फुट्नसक्छ : रामदीप आचार्य
आइतवार, माघ ११, २०७७ ०८:३४:३६ युनिकोड
सहमति भयो राम्रो भइहाल्यो सहमति भएन भनेपनि नराम्रो हुँदैन । ९ जनाको सचिवालय छ, बहुमतले निर्णय गर्छ ।
शुक्रवार, मंसिर १२, २०७७ यार्सान्यूज
सुर्खेत । फुटको सँघारमा पुगेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अर्थपूर्ण बैठकका रुपमा हेरिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठक १३ मंसीर अर्थात् भोली बस्दैछ । त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेकोे प्रस्तावको जवाफमा अर्को प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। यही बैठकलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीभित्रका दुवै समूह सघन आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। ओलीलाई प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफमा अर्को प्रस्ताव लेख्न १० दिनको समय दिएको ३ मंसीरको सचिवालय बैठकले भोली सचिवालयको अर्को बैठक तोक्दै १८ मंसीरमा स्थायी कमिटी र २५ मंसीरमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मितिसमेत तय गरेको थियो। त्यसयता दुवै पक्ष के कस्ता तयारी गरिरहेका छन् ? अब शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकपछि नेकपाभित्रको विवादले कुन मोड लेला भन्ने विषयमा यार्सान्युज डटकमका प्रधानसम्पादक देवीराम देवकोटाले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता रामदीप आचार्यसंग कुराकानी गरेका छन् । यहाँ प्रस्तुत छ कुराकानीका सम्पादित अंशहरु :
तपाईको पार्टीमा चुलिएको विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?
फरक आन्दोलनको पृष्ठभुमी बोकेको दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एक भए र नेकपा बन्यो । पार्टी बनेपछि स्पष्ट बैचारिक आधार हुन्छ । बैचारिक दृष्टिकोण र दर्शनको आधारमा पार्टीहरु बन्ने हो र भत्कने हो । नेकपाले आजको अबस्थामा आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद,लेनिनवादलाई मान्यो । समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद राजनैतिक कार्यदिशा बन्यो । राजनीतिक कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको संगठनात्मक संरचना, सरकारको कार्यविभाजन,सरकारका कार्यक्रमहरु तय गर्नुपथ्र्यो । किनभने नेकपाले समाजवादी आधार तयार गर्ने भनेको थियो । समाजवाद भनेको एउटा सामुहिक प्रयत्न थियो । पार्टीको योजनाबद्ध सचेतन प्रयत्नद्धारा निर्माण गर्ने एउटा अभियान थियो तर त्यस्तो सामुहिक प्रयत्न भएन । अर्कोकुरा जनताको जनवाद भनेको के हो भनेर स्पष्ट व्याख्या गर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि भएन । सरकारले के के गर्नुपर्ने हो ? पार्टी कमिटीले के के गर्नुपर्ने हो ? त्यसो गरेको भए हाम्रो बाटो फराकिलो हुन्थ्यो,एकताबद्ध हुन्थ्यो र नयाँ खोज अनुसन्धान गरेर अगाडी बढिन्थ्यो । यो रुमल्लियो । पूर्व एमालेलाई जे–जे लागेको छ,त्यसैलाई आधार मान्यो । पूर्व माओवादीले आफूलाई जे–जे लागेको छ,त्यसैलाई आधार मान्यो । साझा प्रयत्न र साझा कार्यक्रम खडा गर्ने काम भएन । त्यसकारण पार्टी राजनीतिक गोलचक्करमा फस्न पुग्यो । जब पार्टीमा गति पैदा हुँदैन,त्यो यथास्थितिमा फस्छ भनेपछि त्यसमा बिग्रह पैदा हुनु,गतिरोध उत्पन्न हुनु स्वभाविक नियम जस्तो भयो । पार्टीले यात गतिरोधलाई तोड्नु पर्यो यात विघटित हुनुपर्छ । अहिले नेकपा त्यो संक्रमणमा छ । अहिलेको संकटलाई चिरेर नेकपाले गति दिन सक्यो भने गत्यावरोधलाई तोड्ने छ र स्मुथली अगाडी बढ्छ । त्यसलाई तोड्न सकेन भने विभाजनतिर जान्छ । अहिलेको स्थितिमा मलाई लागेको कुरा यही हो ।
ए, भनेपछि पार्टी फुट्ने भयो हैन ?
फुटि नै हाल्छ भनेको होइन । पार्टीमा विधि,पद्धति र निर्णय कार्यान्वयन भएन भने कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुन्छ । त्यो कमजोर हुनु भनेको विभाजन हुनु हो । जनताले साथ नदिनु भनेको कन्युनिष्ट पार्टीका लागि गंभीर प्रश्न पनि हो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक २८ गते सचिवालय वैठकमा दर्ता गरेको प्रस्तावलाई कतिपयले त पार्टी फुटाउने प्रस्ताव भन्छन् त ?
पार्टी फुटाउने प्रस्ताव होइन । पार्टी एकढिक्का बनाउने प्रस्ताव हो । एउटा जीवित पार्टीभित्र बहस हुने कुरा स्वभाविक छ । त्यो बुर्जुवा पार्टीमा पनि हुन्छ र कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि हुन्छ । पार्टी बाहिरको बहसलाई पार्टीभित्र ल्याउनुपर्छ यो सहि कुरा हो । तर दस्तावेजहरु प्रस्तुत गर्दैमा केही पनि बिग्रीदैन । दस्तावेज वा प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ । यहाँ पार्टीको नीति,विधि,पद्धति अनुसारको निर्णय लागुहुनुपर्छ भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव आरोपहरुको पुलिन्दा भएकाले कि प्रचण्ड हट्नुपर्छ कि म हट्नुपर्छ भनेर भन्नुलाई त पार्टी फुट्नुको अर्थमा लिन सकिदैन र ? पार्टी एकता गर्नेहरुकै बीचमा टसल पर्दा पार्टी फुट्ने खतरा भएन ?
ती आरोपहरु खण्डन गरे भैहाल्यो नी । प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । उहाँले ल्याउने प्रस्ताव भनेको प्रचण्डको प्रस्तावमाथि खण्डन गर्ने हो । उहाँले खण्डन गर्दा तथ्यले प्रमाणित भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो । उदाहरणको निम्ति सरकारले आम जनतालाई परिचालित गर्नुको साटो एउटा मुठ्ठीभर, त्यो पनि केही व्यापारिक घरनाहरु (यति समूह,ओम्नी समूह)लाई राज्यले प्रोटेक्ट गर्ने, परिचालित गर्ने, संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने र राज्यले नै सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टीङ्गमा डाइरेक्ट कमिशनका लागि डिल गर्ने, त्यो कुरालाई पनि देखे नदेखे झै गर्ने गरेको कुरा दुनियाँ सामु घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । हिजो पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । त्यो भ्रष्टाचार व्यक्तिगत तहमा बढी हुन्थ्यो । आज राज्य नै सहभागी भएर संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने,तर भ्रष्टाचारीहरुलाई चोख्याउनका लागि प्रयत्न गर्ने, देखेको नदेखे झै गर्ने गरिरहेको छ । यदि बिरोधी छ,आफूलाई मन परेको छैन भने त्यसलाई पुरै सिध्याइदिनु पर्यो भन्ने,अख्तियार अदालत के के प्रयोग गर्नुपर्छ सबै गर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ आफ्नो हिमचिम बढेको छ,मन मिलेको छ भनेपछि सबै खतहरुलाई माफ गर्ने गरेपछि कसरी पार्टी बन्छ ? आरोपहरु तर्कले मात्रै खण्डन गरेर हुँदैन, तथ्यले पनि खण्डन हुनुपर्यो । जनताले पनि पत्याउनु पर्यो । त्यसर्थ विचारमा बहस हुँदाखेरी आत्तिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एक्काइसौ शताब्दी सुचना प्रबिधीको युग हो । मान्छेले सुचना पाउनै पर्छ । जनताको बीचमा जानैपर्छ र त्यो कुरालाई जनताले भन्नैपर्छ । जनताले नेताको छवी धमिलो देख्यो अविश्वास गर्यो भने जनताले पार्टी छोड्छ । नयाँ पार्टीले नयाँ नेता खोज्छ । होइन,जनताले विश्वास गरिराख्यो भने नेता र पार्टीलाई अनुमोदित त गर्छ त । त्यसर्थ बहस गरेर पार्टी फुट्दैन तर षड्यन्त्र भयो भने फुट्नसक्छ ।
षडयन्त्र कोबाट भयो ?
षडयन्त्र को बाट भयो भन्ने कुरा त सबैले बुझेकै कुरा हो नि । पार्टीले गरेको संस्थागत निर्णय सरकारले पालना गर्ने पद्धतीको विकास हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन । सरकार नै पार्टी बन्न गयो । सरकारले जे गरेको छ त्यो पार्टीको नै हो भने जस्तो भयो । यो तीनै तहका सरकारमा भयो । मुलतः केन्द्रमा त्यही भयो । दोस्रो कुरा त्यसो भएपनि सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वहरु थिए । सरकार चिप्लिएको देखिन्छ । दृष्टिकोणमा किन चिप्लिएको हो भने जनमत मेरा लागि मात्र आएको हो भन्ने भ्रम सरकारमा रहेकालाई भयो । एउटा अमुक व्यक्ति विशेषका लागि चुनावमा जनमत आएको थिएन । ७० बर्षदेखि अनवरत संर्घष र मिहिनेतबाट जनमत प्राप्त भएको हो । यसको केन्द्रिकरणको रुपमा त्यो अभिव्यक्त भएको हो भन्ने कुरालाई सरकारको नेतृत्वले बुझ्न सकेन ।
अर्को राष्ट्रियताको मुद्धामा प्रचारबाजी रंग लगाउने काम मात्रै बढी भयो । भित्र एकथोक गर्ने बाहिर अर्को थोक गर्ने । राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्धा सहि ढंगले उठाउन सकेको भए जनतालाई एकताबद्ध गथ्र्यो । कहिलेकाही बजारमा चाहि नक्कली राष्ट्रवाद भन्ने आउँछ । जनतालाई झुक्याएर भोट माग्न बाहिर राष्ट्रवाद भन्ने भित्रचाहि लम्पसार हुने । जस्तो उदाहरणको निम्ति खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसंग प्रधानमन्त्रीले डिल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? औपचारिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसंग डिल गर्नुपर्यो । राजनीतिक हिसाबले डिल गर्नुपर्यो । टेक्निकल पाटो डिल गर्ने टेक्निकल टिम हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक स्वाभिमानलाई गुमाउने काम गर्ने अनि बाहिर प्रचारबाजी गर्नको निम्ति नक्शा छापिदिने । भित्र चाहि त्यसको निम्ति बार्गेनिड गर्ने । यी सबै कुराहरु षडयन्त्र हुन् ।
अब नेकपामा देखिएको विवादको अन्त्य पार्टी फुटेर टुंगिन्छ या पार्टीको गत्यावरोध अन्त्य भएर हुन्छ ?
हाम्रो पार्टीको बिधानले समस्याहरुलाई हल गर्ने सरल तरीकाहरु भनेको छ । अहिले दुइ पार्टी एक भएर संक्रमकालीन अवस्था भएका कारणले गर्दाखेरी मुलतः हामीले सहमतिबाट समस्याहरुको समाधान खोज्ने भन्ने छ । यदि कथंमकदाचित हामीले सहमति गर्नै सकेनौं ।भयंकर ठूल ठूला विवादहरु आए,सहमतिबाट समाधान गर्ने स्थिति नै भएन भने उदाहरणको निम्ति एमसीसीको मुद्धामा कुरा नमिल्न सक्छ,राष्ट्रियताको बिषयमा कुरा नमिल्न सक्छ । समाजवादको यात्रामा जाने कुरामा सहमति नहुनसक्छ । यो विचार र कार्यदिशाकै मामिला पनि हुनसक्ला । त्यस्तो अवस्थामा जनबादी केन्द्रियताको अभ्यास गर्ने । त्यसमा बहुमतको निर्णय पार्टीको आधिकारीक निर्णय हुन्छ, त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । अल्पमतको मतलाई सम्मान गरिन्छ । सुरक्षित गरिन्छ । पार्टीभित्रै राखिन्छ । जतिसुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि सहमति गर्न सकिन्छ । तर भएन भने बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले मान्ने भन्ने जुन लेनिनवादी सिद्धान्त छ, त्यो निर्णयलाई मानेर जाने । पार्टी सिद्धान्तलाई पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ताले मान्न तयार हुनुपर्यो । पार्टीको सिद्धान्त,पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त मान्न छोडेपछि पार्टी एकता हुँदैन । पार्टीका विवाद समाधान हुने मैले सजिलै देखेको छु । यो बिधिलाई अबलम्बन गरेपछि यो पार्टी फुट्दैन र समस्याको समाधान हुन्छ । सचिवालयमा डकुमेन्ट प्रस्तुत भयो । सचिवालयमा सहमति गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । सहमति भयो राम्रो भइहाल्यो सहमति भएन भनेपनि नराम्रो हुँदैन । ९ जनाको सचिवालय छ, बहुमतले निर्णय गर्छ । सचिवालयले प्रस्ताव तयार गरेर स्थाइ समितिमा लिन्छ । स्थाइ समितिमा छलफल हुन्छ । स्थायी समितिले सहमति गर्ने प्रयत्न गर्छ सहमति भए भइ नै हाल्यो । सहमति तयार भएन भने स्थायी समितिले प्रस्ताव तयार गर्छ । बहुमतको निर्णय केन्द्रिय समितिमा लिन्छ । केन्द्रिय समितिमा जान्छ । केन्द्रिय समितिले सहमति गर्ने प्रयत्न गर्छ । सहमति भएन भने केन्द्रिय समितिको बहुमतले निर्णय गर्छ । सजिलो बाटो छ । यसलाई किन जटिल बनाउने ? यसरी पार्टीमा दुइ विकल्प छन् । एक सहमतिमा जाने हो । हुँदैन,अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्णय हुने हो । यसो भयो भने पार्टी फुट्दैन ।
सहमतिका लागि प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ नी । के त्यो प्रस्ताव फिर्ता गरेर सहमति हुन सक्दैन ?
सहमतिमा हुनसक्छन् तर सहमति नभए फिर्ता हुँदैनन् । अर्को कुरा प्रस्तावहरु फिर्ता हुनुहुँदैन । पार्टीमा उठिसकेका बिषयहरु पार्टी कमिटिले छिनोफानो गर्नुपर्यो । फिर्ता हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउने प्रस्ताव पनि फिर्ता हुनुहुँदैन । प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव पनि फिर्ता गर्नुपर्दैन । ती प्रस्ताव को ठिक को वेठिक भन्ने कुरा त छलफलबाट टुंग्याउनुपर्यो । बहुमतले जुन प्रस्ताव पारित गर्छ त्यो पार्टीको आधिकारीक प्रस्ताव हुन्छ । अर्को प्रस्ताव पार्टीले सुरक्षित गर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरले गंभीर आरोपहरुको पुलिन्दा भनेको छ त प्रचण्डको प्रस्तावलाई ?
आरोप होइन । आरोप हो भने सत्य र तथ्यले पुष्टी गर्नुपर्यो । जे भएको छ त्यही आएको छ । अनि कसरी आरोप हुन्छ । पार्टीमा देखापरेका समस्याहरु त उठ्नुपर्यो नी । यदि त्यसो होइन भने उहाँहरुको अनुकुलतामा आएको प्रस्ताव हुने अनि प्रतिकुलतामा आएको प्रस्तावलाई आरोपको पुलिन्दा भन्ने ? यो कही मिल्छ ? यो नहुने कुरा गर्नु हुँदैन । बरु ती प्रस्तावमा कुन सहि छन् र कुन गलत भन्ने कुरामा मात्रै बहस गर्ने हो । तर प्रस्तावलाई त प्रस्ताव भन्नुपर्यो । त्यो खराब प्रस्ताव भए खराब भन्नुपर्यो । लगाइएका आरोपहरु सहि हुन भने त्यो सहि प्रस्ताव भन्नुपर्यो । पार्टी कमिटिले एउटा प्रस्ताव पास गर्नुपर्यो । प्रस्ताव नै होइन त हामी भन्न सक्दैनौ त । प्रधानमन्त्रीले ल्याउने पनि प्रस्ताव हो । कार्यकारी अध्यक्षले ल्याएको पनि त्यो प्रस्ताव हो । प्रस्ताव सहि कि खराब भन्नेबारे बहस गर्न सकिन्छ । तर मैले ल्याएको प्रस्ताव हो अर्कोले ल्याएको आरोप हो भन्न त मिल्दै मिल्दैन ।
सहमित हुने संभावना कत्तिको छ ?
सहमति आत्मआलोचनाबाट हुन्छ । यदि तत्वज्ञान प्राप्त भयो भने हामीसित चाहि संकटको भनुभूति भयो भने हामीले जे समझदारी गरेर पार्टी एकता गरेका हौं,जनताप्रति हाम्रो घात हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति भएर आफ्ना गल्ति कमजोरीप्रति आत्मआलोचना भयो भने सहमति हुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने हो र मैले जे गरेको छु, यो धर्तिमा राम्रो मात्रै गरेको छु नराम्रो गरेका देख्नेभरी सब खराब हुन् भन्ने हो भने सहमति हुँदैन । बहुमत अल्पमतका आधारमा निर्णय भएर टुंगिन्छ ।
जसको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत हुन्छ,उसले नेतृत्वबाट हट्नुपर्छ त अब, प्रधानमन्त्रीले भने झै ?
समयको पदचाप पछ्याउने नेताले त्यहाँ पुग्नै पर्ने हुँदैन । नपुग्नु पर्ने हो । यदि आफूले गरेको क्रियाकलापले गर्दा पार्टी कमिटि र अन्य लिडरहरुलाई विश्वासमा लिन सकिन भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने अवसर हुन्छ । त्यसका लागि कार्यशैली सुधार्नुपर्छ । यात पार्टीको एकता र बहुमतको विश्वासलाई जोगाइ राख्नको निम्ति बाटो बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित लिडरले बुझ्ने कुरा हो । यदि लिडरले समयको पद्चापलाई बुझ्न सकेन भने आउने परिघटना कमिटी प्रणालीले निर्णय गर्नसक्छ । अहिले नै निर्णय गरिसकेको छैन । पद छोड्नुस भनेको छैन । भोली परिस्थिति त्यस्तो आउन सक्छ की कमिटीको बहुमत अर्थात् सिंगो पार्टीको बहुमत एकातिर जाने, सिमित नेताहरु अर्को तिर जाने भयो भने पार्टी उनीहरुको पछि लागेर बस्दैन । कमिटी प्रणाली स्मुथली अगाडी बढ्छ ।
प्रस्तावहरु पार्टी कमिटीमा मात्रै छलफल हुन्छन् की पार्टीको संसदीय दलमा पनि छलफल हुन्छ ?
संसदीय दल त पार्टीको एक अंग हो । पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एउटा अंग हो । मुख्यतः अहिले पार्टीको सचिवालय, स्थायी र केन्द्रिय कमिटी मात्रै आयोजना गरेको कारणले त्यहाँ मात्रै छलफल हुन्छ । केन्द्रिय कमिटी नै महाधिवेशन नभएको बेला सर्वोच्च थलो हो । केन्द्रिय कमिटीले गर्ने निर्णय आधिकारीक र अन्तिम निर्णय हुन्छ । संसदीय दलले त केन्द्रिय कमिटीको निर्णहरु कार्यान्वयन गर्ने हो ।
पार्टी बैठकमा एउटाको प्रस्ताव पारित हुने संसदीय दलमा अर्को पक्षले बहुमत जुटाउने स्थिती बन्यो भने के हुन्छ ?
अरु कुनै कमिटीभन्दा पनि केन्द्रिय समितिले गरेका निर्णयलाई त महाधिवेशनले मात्रै क्रम गर्छ । अरु कमिटीहरु मुख्य होइनन् । महाधिवेशनभन्दा अन्त कतै जाँदैन र त्यो संभावना पनि छैन पार्टीमा । पार्टीमा जसको प्रस्ताव पारित हुन्छ । उसैको संसदीय दलमा पनि बहुमत हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, मंसिर १२, २०७७, ०५:४०:००